Electronic Pet Big Dog Bark Collar mpamatsy sy mpanamboatra - orinasa Shina - Shenzhen TIZE Technology Co., ltd.
Home > Products > Tsy misy bark Collar > Ny bateria tsy namboarina amboaram-bokatra > Elektronika Pet Big Dog Bark Collar
Manome ny Electronic Pet Big Dog Bark Collar.We dia mpamokatra sy mpanondrana arak'asa, natsangana tamin'ny Jan.2011, orinasa 2600 metatra toradroa, mpiasa 120, manana fahaiza-manao fampandrosoana sy fikarohana, nanolo-tena ho tonga orinasa avo lenta avo indrindra amin'ny biby fiompy mpamatsy. SGS & BV nitazom-bidy ny mpamatsy an'i Sina. Vahaingo ny fenitra iraisam-pirenena CE ROHS. Izahay dia afaka manome ny mpitiavana sy ny biby fiompiny amin'ny kalitao lafo vidy sy lafo vidy, izay manarona ny fiainany, ny asa sy ny fialam-boly. Manantena izahay fa lasa mpiara-miasa maharitra aminao any Chine ianao.
1.Product Introduction of Elektronika Pet Big Dog Bark Collar
Ny kitrokely alika tsy manaitra anay dia mora kokoa noho ireo fitaovana lavitra miasa. Nihetsika avy hatrany teo amin'ny fandehanana fiara. Afatory fotsiny ny alikanao amin'ny alàlan'ny fitaovana fampiatoana ajanony ary ho hitan'ny alikanao fa tsy tsara ny fanakorontana. Amin'ny farany dia tsy ilainao ny vozon-tranonjaza, apetraho ary asaivo ny kirarinao. Ho lasa mpankatò ho azy ny alikanao
2.Product Parameter (Specification) of Elektronika Pet Big Dog Bark Collar
Anarana amin'ny zavatra Biby elektronika kely tsy misy taolan'ny alika henjehina
Color Blue, Red, mainty
8. Ny fanaovana poliera polyester mainty 65cm miaraka amina ravin-kofehy reflektika 2.
3.Product Feature And Application of Elektronika Pet Big Dog Bark Collar
Ny amboarin'ny alika henin'ny PET682 dia saika mandeha ho azy. Mametaka bateria alkaliire 6 volt fotsiny, amboary ny tadiny amin'ny halehiben'ny alikan'ny alikanao ary ny PET665M dia manomboka manao ny asany avy hatrany.
4.Product Details of Elektronika Pet Big Dog Bark Collar
Ny fehikibo miorim-paka amin'ny alika mifangaro 20 ~ 55m, alika mety amin'ny 8-50KG.
Na alika na alika lehibe ny alikanao, mety hifanaraka tsara azy ireo ny voarindran'ny lozisialy mitsitsy. Ny fehin-kibo nilona avo lenta miaraka amin'ny tsipika feno taratra dia mora zaka. Miverena milamina ny sainao raha tsy manimba ny alikanao.
UPGRADE DESIGN: Mba hahatonga anao mahazo aina kokoa rehefa fanazaran-tena, tsy misy taolam-paty manafintohina mampiasa baomba vaovao. Tsy mitovy amin'ny gorodona hoditra eny an-tsena, ity prongs izao mampahazo aina kokoa, mahomby kokoa.
5.Product Qualification of Elektronika Pet Big Dog Bark Collar
6.Deliver,Shipping And Serving of Elektronika Pet Big Dog Bark Collar
Hot Tags: Elektronika biby fiompy biby goavam-be any Sina, Shina, mpanamboatra, mpamatsy, orinasa, vita manokana, fivarotana, mora vidy, manavao, miora, fividianana, vidiny, pricelist
Bark Dog CollarTsy azo antoka ny fanamboarana elektronika olombelona tsy misy alika fanangonana alika ho an'ny alikaAzo averina amina baoty tsy mifangaro amin'ny alikaElektronika Pet Big Dog Rechargeable No Bark CollarBig Dog Rechargeable No Bark CollarZava-biby lehibe azo refesina azo alika kitapom-bola